P30 ထက်ဈေးသက်သာမယ့် Huawei P40 ဖုန်း | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone P30 ထက်ဈေးသက်သာမယ့် Huawei P40 ဖုန်း
P30 ထက်ဈေးသက်သာမယ့် Huawei P40 ဖုန်း
Huawei အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က P30 Pro စမတ်ဖုန်းတွေကို စတင်မိတ်ဆက် ရောင်းချတဲ့ အချိန်မှာ ယူရို ၁ထောင်ဝန်းကျင်နဲ့ P30 ကိုတော့ ယူရို 800 ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ရောင်းမယ့် ဖုန်းတွေကတော့ ဈေးသက်သာမှာပါ။ leakster ဖြစ်တဲ့ @RODENT950 ကနေ P40 ရဲ့ဖုန်းဈေးနှုန်းတွေကို ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေအရ Huawei P40 စမတ်ဖုန်းရဲ့ ဈေးနှုန်းက ယူရို 600 ဝန်းကျင်နဲ့ ပရိုဖုန်းကတော့ ယူရို ၈၀၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယမြောက် မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ Huawei P40 Pro Premium edition ကိုတော့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နဲ့ရောင်းချလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလောက်ဈေးလျော့ချလိုက်တာဟာ Google Mobile Services (GMS) မပါဝင်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Premium ဖုန်းမှာတော့ ကင်မရာအတွက် 10x optical zoom ထည့်ပေးထားပြီး Pro မှာတော့ 5x optical zoom နဲ့ဖြစ်မှာပါ။ ပုံမှန်မော်ဒယ်ကတော့ 3x optical zoom လောက်ပဲထည့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ Quad Quad Bayer filter နဲ့အတူ 52MP ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာအသစ်တွေ သုံးလာမယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ ဒီဈေးနှုန်းဟာ ပြိုင်ဘက် Samsung ကထွက်လာမယ့် Galaxy S20 series နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ဈေးအတော်သက်သာမှာပါ။ တခုပါဘဲ Google Play Store နဲ့ Maps တော့ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။.
P30 ထက္ေဈးသက္သာမယ့္ Huawei P40 ဖုန္း
Huawei အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က P30 Pro စမတ္ဖုန္းေတြကို စတင္မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်တဲ့ အခ်ိန္မွာ ယူ႐ို ၁ေထာင္ဝန္းက်င္နဲ႔ P30 ကိုေတာ့ ယူ႐ို 800 က်သင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေရာင္းမယ့္ ဖုန္းေတြကေတာ့ ေဈးသက္သာမွာပါ။ leakster ျဖစ္တဲ့ @RODENT950 ကေန P40 ရဲ႕ဖုန္းေဈးႏႈန္းေတြကို ခန႔္မွန္းလိုက္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြအရ Huawei P40 စမတ္ဖုန္းရဲ႕ ေဈးႏႈန္းက ယူ႐ို 600 ဝန္းက်င္နဲ႔ ပ႐ိုဖုန္းကေတာ့ ယူ႐ို ၈၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယေျမာက္ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္တဲ့ Huawei P40 Pro Premium edition ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ နဲ႔ေရာင္းခ်လာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေလာက္ေဈးေလ်ာ့ခ်လိုက္တာဟာ Google Mobile Services (GMS) မပါဝင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Premium ဖုန္းမွာေတာ့ ကင္မရာအတြက္ 10x optical zoom ထည့္ေပးထားၿပီး Pro မွာေတာ့ 5x optical zoom နဲ႔ျဖစ္မွာပါ။ ပုံမွန္ေမာ္ဒယ္ကေတာ့ 3x optical zoom ေလာက္ပဲထည့္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။
တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူအေနနဲ႔ Quad Quad Bayer filter နဲ႔အတူ 52MP ကင္မရာအာ႐ုံခံကိရိယာအသစ္ေတြ သုံးလာမယ္လို႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။ ဒီေဈးႏႈန္းဟာ ၿပိဳင္ဘက္ Samsung ကထြက္လာမယ့္ Galaxy S20 series နဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ ေဈးအေတာ္သက္သာမွာပါ။ တခုပါဘဲ Google Play Store နဲ႔ Maps ေတာ့ပါဝင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။.
Previous articleiOS နဲ့ iPadOS 13.3.1 မှာ U1 chip ကိုပိတ်ဖွင့်လုပ်နိုင်မယ့်ခလုတ် ပါဝင်လာ
Next articleXiaomi Mi 10 Pro တွင် 16GB RAM ထည့်သွင်းလာမည်